China Isebenzisa kanjani izimpawu zedijithali ekwakhiweni kwenkampani yokwamukela izivakashi? ifektri nabakhiqizi | ISYTON
Ephathekayo Digital Signage
Industrial PC Gada
Floor Stand Ukukhangisa Player
Isikrini isikhangiso Player
Net Inguqulo isikhangiso Player
Wall Mount Ukukhangisa Player
Isikrini Wall Mount isikhangiso Player
Net Inguqulo Wall egibele isikhangiso Player
Isidlali Sokukhangisa Sangaphandle
Floor Stand Outdoor isikhangiso Player
Wall Mount Outdoor isikhangiso Player Gear Reductor
Shoe Polish isikhangiso Player
Bus Ukukhangisa Player
Ungayisebenzisa kanjani izimpawu zedijithali ekwakhiweni kwenkampani yokwamukela izivakashi?
I-SYTON ifake izimpawu zedijithali zokwamukela inkampani. Imisebenzi yayo ibandakanya ukupheqa izindaba, isimo sezulu, amaslayidi emidiya, uhlu lwemicimbi nemisebenzi yenkampani
Nsuku zonke, izinkampani eziningi ngokwengeziwe emhlabeni ziqala ukusebenzisa izimpawu ezidijithali ukuhlinzeka ngolwazi oluthandekayo, oluthandekayo nolusizo lokungenela inkampani. Kusukela kuzikrini zokwamukela kuya kuzincwadi zedijithali, izimpawu zedijithali endaweni yokwamukela izivakashi zingaba nomthelela omkhulu enkampanini yakho. Uma futhi ufuna ukusebenzisa izimpawu zedijithali ukuxhumana kwangaphakathi.
Ake sibheke izindlela ezimbalwa zokusebenzisa izimpawu zedijithali endaweni yokwamukela izivakashi yenkampani.
Sebenzisa izimpawu ezidijithali endaweni yokwamukela izivakashi enkampanini yakho ukusakaza kahle nangokunembile umlando wenkampani yakho, inhloso, umbono, umugqa wesikhathi, ababambiqhaza, nempumelelo kumakhasimende angahle abe khona kanye nabasebenzi abasha. Le ndlela yokwabelana ngezindaba zenkampani yesimanje, iyanconywa futhi iyintsha. Amavidiyo ezinkampani ezimfushane nezindaba zokuphumelela kwamakhasimende nazo ziyizinto ezinhle. Bangakutshela indaba yakho futhi ngasikhathi sinye baqinise ukuthi kungani inkampani yakho yehlukile nokuthi ihluke kanjani.
Nikeza izivakashi zakho ukufinyelela okulula kwimininingwane ebalulekile yokuthola indlela. Usebenzisa ikhathalogu yedijithali, ungangeza amamephu wokutholwa kwesikrini sokuthinta, imininingwane yokuxhumana, izinombolo ze-suite, njll. Ikhathalogu yedijithali ingabuyekezwa ngesikhathi sangempela kusuka kunoma iyiphi indawo, futhi ungabhala abaqashi phansi, inombolo ye-suite noma i-alfabhethi.
Ngaphezu kokufakwa kuhlu kwekhathalogi yedijithali, ungaphinda wenze ngezifiso okuqukethwe kwesikrini ngemilayezo yokwamukela yangokwezifiso yezivakashi ezithile namakhasimende. Le milayezo ingahlelelwa ngaphambilini ukuthi idlalwe ngokuzenzekelayo futhi iphelelwe yisikhathi ngosuku nesikhathi esinqunyiwe.
Lapho izivakashi zingena endaweni yakho yokwamukela izivakashi, kubalulekile ukuthi wakhe umbono wokuqala onempilo futhi omuhle. Lokhu kuchaza imizwa yesivakashi kulo lonke ukuvakasha. Indlela enhle yokwenza lokhu ngempumelelo ukusebenzisa izimpawu zedijithali zenkampani ngendlela yodonga lwevidiyo (2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, njll.). Udonga lwe-TV luzoshiya umbono ojulile futhi oyingqayizivele. Le yindlela enhle yokwenza umkhiqizo wakho ugqame!
Ukwengeza ukumangala okwengeziwe, ungamukela izivakashi ngemilayezo yokwamukela uqobo enezithombe, umbhalo, nolunye ulwazi oluhlobene nezivakashi zakho. Ungasebenzisa futhi udonga lwevidiyo ukubonisa zonke izinhlobo zokuqukethwe okuthakazelisayo, njengolwazi lomkhiqizo omusha nezikhangiso, imicimbi emikhulu ezayo, izindaba zamanje zenkampani kanye nokuphakelwa kwezokuxhumana. Ibuye ivumele ukusebenzisana kwamakhasimende okwenziwe ngezifiso futhi okusebenzayo, okuzoheha izivakashi nezivakashi kakhulu.
Uma kuqhathaniswa nokusetshenziswa kwezimpawu zendabuko zeposta noma amabhodi amakhulu, umthelela wodonga lwevidiyo ubaluleke kakhulu. Ngemuva kwakho konke, ukunxenxa izinkampani kuyisiqalo esikhulu kuzo zonke izivakashi, noma ngabe izivakashi ezintsha noma izivakashi ezibuyela emakhaya. Ngakho-ke kungani ungasebenzisi izimpawu ezidijithali endaweni yokwamukela izivakashi ukwakha okuhlangenwe nakho okungenakulibaleka nokuheha izivakashi zakho, izivakashi kanye nabasebenzi, ukuze ukwazi ukusebenzisa leli thuba ngokugcwele?
Outdoor Digital Signage Double , Isikrini Interactive Kiosk , Isikrini Kiosk, Self Service Interactive Kiosk , Interactive Isikrini Kiosk , Interactive Kiosk ,